ဆွာရက်ဇ် Suarez နေရာ အစားဝင်ဖို့ရှိနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူးများ
19 Oct 2018 . 4:53 PM
ဘာစီလိုနာအသင်းတိုက်စစ်မှူး ဆွာရက်ဇ် Suarez ဟာ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြား တစ်ခုကိုရောက်လာပြီး ခြေစွမ်းပိုင်းကျဆင်းမှု အနည်းငယ်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့် ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူးရှာဖွေနေတာကိုလည်း အားလုံးအသိပဲဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ပရိသတ်တွေအတွက် ဆွာရက်ဇ် Suarez နေရာ အစားဝင်ဖို့ရှိနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၅) ဂိုးမက်ဇ် Gómez
ဆယ်လ်တာဗီဂိုအသင်း လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ဂိုးမက်ဇ် Gómez ဟာ ခြေစွမ်းခြေစရှိတဲ့ တိုက်စစ်မှူးဖြစ်တာကြောင့် ဒီစာရင်းထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူးဖြစ်လာဖို့ကတော့ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။
(၄) ၀ါနာ Werner
လိုက်ပစ်ဇ်အသင်းရဲ့ ဂျာမနီလက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး ၀ါနာ Werner ဟာ ငယ်ရွယ်ပြီး အလားအလာကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်တာကြောင့် ဘာစီလိုနာကစားသမား ဖြစ်မလာမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဒါပေမဲ့ ၀ါနာအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာအဆင့်ရှိတဲ့ ကစားသမားဖြစ်လာဖို့ကတော့ အချိန်တစ်ခုလိုပါသေးတယ်။
(၃) ပီယာတက် Piątek
လက်ရှိမှာ ခြေစွမ်းကောင်းတွေပြသနေတဲ့ ဂျီနိုအာတိုက်စစ်မှူး ပီယာတက် Piątek အနေနဲ့ ဒီစာရင်းမှာ ပါဝင်နေတာဟာ သိပ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပီယာတက်ဟာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ ကစားသမားလား ၊ ဟုန်းခနဲထတောက်တဲ့ ကောက်ရိုးမီးလားဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြရဦးမှာပါ။
(၂) အီကာဒီ Icardi
အင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှူး အီကာဒီ Icardi ဟာ ဒီစာရင်းမှာ ပါကိုပါရမယ့် ကစားသမားပါ။ အီကာဒီဟာ ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးဖြစ်ပေမယ့် ဘာစီလိုနာရဲ့ ကစားကွက်နဲ့ အံဝင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားချင်စရာပါ။ အထောင်တိုက်စစ်မှူး စစ်စစ်တွေဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ရုန်းကန်ရတဲ့ အစဉ်အလာဆိုးရှိနေလို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အီကာဒီရဲ့ ကစားဟန်ဟာ ဘာစီလိုနာထက် ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ ပိုအဆင်ပြေဖို့ ရှိပါတယ်။
(၁) ဖေမီနို Firmino
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ လီဗာပူးလ်တိုက်စစ်မှူး Firmino ကိုခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ တကယ်လည်း ဖေမီနိုရဲ့ ကစားဟန်ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိနေပါတယ်။ ဖေမီနိုဟာ တိုက်စစ်မှာ နေရာစုံရွေ့လျားကစားသူဖြစ်တာကြောင့် ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှာ အဆင်ပြေဖို့ရှိနေပါတယ်။
Photo: Marca , Goal.com , Bundesliga , Sport Archyves , Sporting News
ဆှာရကျဇျ Suarez နရော အစားဝငျဖို့ရှိနတေဲ့ တိုကျစဈမှူးမြား
ဘာစီလိုနာအသငျးတိုကျစဈမှူး ဆှာရကျဇျ Suarez ဟာ အသကျအရှယျအပိုငျးအခွား တဈခုကိုရောကျလာပွီး ခွစှေမျးပိုငျးကဆြငျးမှု အနညျးငယျရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုအနအေထားတှကွေောငျ့ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ တိုကျစဈမှူးရှာဖှနေတောကိုလညျး အားလုံးအသိပဲဖွဈမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ဆှာရကျဇျ Suarez နရော အစားဝငျဖို့ရှိနတေဲ့ တိုကျစဈမှူးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၅) ဂိုးမကျဇျ Gómez
ဆယျလျတာဗီဂိုအသငျး လူငယျတိုကျစဈမှူး ဂိုးမကျဇျ Gómez ဟာ ခွစှေမျးခွစေရှိတဲ့ တိုကျစဈမှူးဖွဈတာကွောငျ့ ဒီစာရငျးထဲမှာပါဝငျနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘာစီလိုနာတိုကျစဈမှူးဖွဈလာဖို့ကတော့ လိုအပျခကျြတှရှေိနပေါသေးတယျ။
(၄) ဝါနာ Werner
လိုကျပဈဇျအသငျးရဲ့ ဂြာမနီလကျရှေးစငျ တိုကျစဈမှူး ဝါနာ Werner ဟာ ငယျရှယျပွီး အလားအလာကောငျးတှပေိုငျဆိုငျထားသူဖွဈတာကွောငျ့ ဘာစီလိုနာကစားသမားဖွဈမလာမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဝါနာအနနေဲ့ ဘာစီလိုနာအဆငျ့ရှိတဲ့ ကစားသမားဖွဈလာဖို့ကတော့ အခြိနျတဈခုလိုပါသေးတယျ။
(၃) ပီယာတကျ Piątek
လကျရှိမှာ ခွစှေမျးကောငျးတှပွေသနတေဲ့ ဂြီနိုအာတိုကျစဈမှူး ပီယာတကျ Piątek အနနေဲ့ ဒီစာရငျးမှာ ပါဝငျနတောဟာ သိပျပွီးထူးဆနျးတဲ့ အရာတော့မဟုတျပါဘူး။ ပီယာတကျဟာ ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိတဲ့ ကစားသမားလား ၊ ဟုနျးခနဲထတောကျတဲ့ ကောကျရိုးမီးလားဆိုတာကိုတော့ စောငျ့ကွညျ့ကွရဦးမှာပါ။
အငျတာမီလနျတိုကျစဈမှူး အီကာဒီ Icardi ဟာ ဒီစာရငျးမှာ ပါကိုပါရမယျ့ ကစားသမားပါ။ အီကာဒီဟာ ထိပျတနျးတိုကျစဈမှူးဖွဈပမေယျ့ ဘာစီလိုနာရဲ့ ကစားကှကျနဲ့ အံဝငျပါ့မလားဆိုတာ စဉျးစားခငျြစရာပါ။ အထောငျတိုကျစဈမှူး စဈစဈတှဟော ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ ရုနျးကနျရတဲ့ အစဉျအလာဆိုးရှိနလေို့ ပဲဖွဈပါတယျ။ အီကာဒီရဲ့ ကစားဟနျဟာ ဘာစီလိုနာထကျ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ ပိုအဆငျပွဖေို့ ရှိပါတယျ။
(၁) ဖမေီနို Firmino
ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ လီဗာပူးလျတိုကျစဈမှူး Firmino ကိုချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနတေယျဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ တကယျလညျး ဖမေီနိုရဲ့ ကစားဟနျဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ပုံစံနဲ့ကိုကျညီမှုရှိနပေါတယျ။ ဖမေီနိုဟာ တိုကျစဈမှာ နရောစုံရှလြေ့ားကစားသူဖွဈတာကွောငျ့ ဘာစီလိုနာတိုကျစဈမှာ အဆငျပွဖေို့ရှိနပေါတယျ။
by Ko Kyue . 18 mins ago